ठाडो र तेर्सो अक्ष पवन टरबाइन, ती कसरी काम गर्छन्? | हरियो नवीकरणीय
जर्मन पोर्टिलो | | वायु शक्ति, नवीकरणीय ऊर्जा
Un ठाडो हावा टर्बाइन u क्षैतिज इलेक्ट्रिक जेनरेटर जस्तै छ जुन काम गर्दछ हावाको गतिज ऊर्जा रूपान्तरण गर्दै मेकानिकल उर्जामा र बिजुली उर्जामा हावा टर्वाइन मार्फत।
त्यहाँ दुई मुख्य प्रकारका छन् ठाडो र तेर्सो अक्ष पवन टरबाइन। ठाडो अक्षको साथ ती अभिमुखिकरण संयन्त्रको आवश्यकता पर्दैन र विद्युतीय जेनेरेटर के हो भनेर भुइँमा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ, तेर्सो अक्षको साथ ती सबै भन्दा बढी प्रयोग गरिन्छ र ठूला हावा फार्महरूमा स्थापना गर्न साना शक्तिको पृथक अनुप्रयोगहरूको विस्तृत श्रृंखलालाई कभर गर्न अनुमति दिन्छ।
हामी दुई मुख्य व्यक्तिहरू खोज्दैछौं, जस्तै माथि उल्लिखित ठाडो र तेर्सो अक्ष पवन टर्बाइनहरू, र ती के हुनेछन् नयाँ प्रस्तावहरू जुन यसबाट अधिक प्राप्त गर्न कोशिस गर्छन् हावामा बिजुली उर्जा उत्पादन गर्न। हामी केहि वर्षमा छौं जहाँ टेक्नोलोजीले प्रगति गर्छ र हामी प्रत्येक पटक नयाँ प्रस्तावहरू देख्छौं जस्तै भोर्टेक्स प्रोजेक्टको प्रोपेलरलेस वायु टर्बाइन वा वायु ट्री, एक प्रकारको मेकानिकल रूख जसले चुपचाप ऊर्जा उत्पन्न गर्दछ।
1 ठाडो हावा टर्बाइन के हो?
2 ठाडो अक्ष पवन टरबाइन कसरी काम गर्दछ?
3 तेर्सो अक्ष पवन टर्बाइनहरू
4 कस्तो प्रकारको हावा टर्वाइन अझ बढी सक्षम छ?
5 हावा टर्बाइन र ईतिहासको प्रयोग
6 हावा टर्बाइनको भविष्य
6.1 अस्थायी हावा टर्बाइनहरूको प्रविधि
6.2 भोर्टेक्स प्रोपेलरलेस वायु टर्बाइनहरू
6.3 हावाको रूख
7 हावा टर्बाइनको अंशहरू
7.3 ब्लेड र रोटर
7.7 ब्रेक प्रणाली
7.8 नियन्त्रण प्रणाली
ठाडो हावा टर्बाइन के हो?
ठाडो अक्ष पवन टरबाइन अनिवार्य रूपमा हावा टर्बाइन हो जहाँ रोटर शाफ्ट ठाडो स्थितिमा स्थापना गरिएको हुन्छ र बिजुली उत्पादन गर्न सक्दछ जुन हावाको दिशाबाट आएको हो भन्ने फरक पर्दैन। यस प्रकारको ठाडो हावा टर्बाइनको फाइदा भनेको त्यो हो थोरै बतास भएको ठाउँमा पनि बिजुली उत्पादन गर्न सक्दछ र सहरी क्षेत्रहरू जहाँ निर्माण नियमहरूले सामान्यतया तेर्सो हावा टर्वाइनहरू स्थापना गर्न निषेध गर्दछ।
उल्लेख गरिएको रूपमा, ठाडो वा ठाडो अक्ष पवन टर्बाइनहरू अभिमुखीकरण संयन्त्रको कुनै आवश्यक छैन र विद्युतीय जेनेरेटर के हुन्छ भूमिमा अवस्थित पाउन सकिन्छ। उसको ऊर्जा उत्पादन कम छ र यसमा केहि साना विकलांगहरू छन् जस्तै यसलाई जानको लागि मोटर चालित गर्नु पर्छ।
त्यहाँ छन् ठाडो वायु टर्बाइनहरूको तीन प्रकार जस्तो कि सवोनियस, जीरोमिल र डार्रियस।
यो हुनु द्वारा विशेषता हो दुई अर्धवृत्त द्वारा गठन निश्चित दूरीमा तेर्सो रूपमा विस्थापित भयो, जसको माध्यमबाट हवाले यात्रा गर्दछ, त्यसैले यसले थोरै शक्ति विकास गर्दछ।
यो एक हुनु को लागि बाहिर खडा संलग्न ठाडो ब्लेडहरूको सेट ठाडो अक्षमा दुई बारहरूको साथ र १० देखि २० किलोवाटसम्मको एक ऊर्जा आपूर्ति दायरा प्रदान गर्दछ।
गठन दुई वा तीन बाइकोनभेक्स ब्लेडहरू सामेल भए ठाडो र शीर्षमा ठाडो अक्षमा, यसले वाइड स्पीड ब्यान्ड भित्र वायुको फाइदा लिन अनुमति दिन्छ। दोष यो हो कि तिनीहरू आफैंले खोल्दैनन् र सभोनिस रोटरको आवश्यक पर्दैन।
ठाडो अक्ष पवन टरबाइन कसरी काम गर्दछ?
ठाडो हावा टर्बाइनहरुमा, ब्लेडहरु हावा चलाउन बल संग घुमाउँछ। ठाडो वायु टर्बाइनहरू, तेर्सो भन्दा फरक, सँधै हावासँग प al्क्तिबद्ध हुन्छन्। यसले फरक पार्दैन जुन उस्तै दिशा हो किन कि तिनीहरूले काम गर्न सक्दछ जब कि हावा चल्ने वेगले चलेको छ। यी ठाडो पवन टर्बाइनहरूको फाइदा यो हो ती क्षुद्र भएको टर्बाइनहरू भन्दा सानो र फिकट छन्। सानो भएकोले, तिनीहरूले कम ऊर्जा उत्पादन गर्छन्। जे होस्, तिनीहरू घर ताप्न सक्षम छन्, सबै आन्तरिक र बाहिरी बत्तीहरू भएको र इलेक्ट्रिक कारको ब्याट्री रिचार्ज गर्न।
तेर्सो अक्ष पवन टर्बाइनहरू
तेर्सो अक्षको साथ ती हुन् सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको र तिनीहरू ती हुन् जुन हामीले ती ठूला हावा फार्महरूमा भेट्टाउन सक्छौं जहाँ यस प्रकारको हावा टर्बाइनहरू १ मेगावाट माथि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यो मूलतः एक घुमाउने मेसिन हो जसमा चाल चालु हावाको गतिज उर्जा द्वारा उत्पन्न हुन्छ जब यो रोटरमा कार्य गर्दछ जुन सामान्यतया तीन ब्लेड हुन्छ। उत्पादन गरिएको परिक्रमण आन्दोलन प्रसारण र एक वेग गुणक द्वारा एक जेनेरेटरमा गुणा गरिन्छ जुन विद्युतीय उर्जा उत्पादनको लागि जिम्मेवार छ।
यी सबै कम्पोनेन्टहरू तिनीहरू गोन्डोलामा उभिन्छन् यो समर्थन टावरको माथि राखिएको छ। तिनीहरू परम्परागत हुन् जुन हाम्रो देशको केहि क्षेत्रहरूमा फेला पार्न सकिन्छ जुन एक भिन्न क्षितिज र ल्यान्डस्केप तर सफा र सस्तो ऊर्जा प्रस्ताव गर्दै।
प्रत्येक हावा टर्वाइन छ एक माइक्रोप्रोसेसर जुन नियन्त्रणको लागि जिम्मेवार छ र यसको स्टार्ट-अप, अपरेशन र शटडाउन भ्यारीएबलहरू नियमित गर्नुहोस्। यसले स्थापनाको नियन्त्रण केन्द्रमा यी सबै जानकारी र डाटा लिन्छ। यी प्रत्येक हावा टर्वाइनहरू टावरको आधारमा, सबै विद्युतीय कम्पोनेन्टहरू (स्वचालित स्विचहरू, वर्तमान ट्रान्सफार्मरहरू, ओभरभोल्टेजेन्ट प्रोटेक्टरहरू इत्यादि) सहितको मन्त्रिपरिषद्मा पर्छन् जुन नेटवर्क वा खपतको जडानमा उत्पन्न विद्युतीय उर्जाको ढुवानी गर्न सजिलो हुन्छ। पोइन्टहरू।
हावा टर्वाइनबाट प्राप्त गरिएको उर्जा हावाको शक्तिमा निर्भर गर्दछ जुन रोटरबाट जान्छ र हावाको घनत्वमा सीधा समानुपातिक हुन्छ, क्षेत्र यसको ब्लेडहरू र बतासको गतिबाट बगेर जान्छ।
हावा टर्बाइनको अपरेशन यसको पावर वक्रको विशेषता हो यसले वायु गतिको दायरालाई जनाउँछ जुन यो अपरेट गर्न सकिन्छ र प्रत्येक केसको लागि चाहिने उर्जा।
कस्तो प्रकारको हावा टर्वाइन अझ बढी सक्षम छ?
ऊर्जा दक्षता को मामला मा, तेर्सो हावा टर्बाइनहरु खेल हो कि एक हो। र यो यो हो कि तिनीहरू उच्च परिक्रमण गतिमा पुग्न सक्षम छन् त्यसैले तिनीहरूलाई तल्लो घुमाउने गुणन अनुपातको एक गियरबक्स आवश्यक छ। थप रूपमा, किनभने यी हावा टर्वाइनहरूको निर्माण एकदम उच्च माथि हुनुपर्दछ हावाको वेगमा वृद्धि हदसम्म प्रयोग गरिन्छ। वातावरणको माथिल्लो तहहरूमा, हावाको वेग बढी छ किनकि यसमा कुनै प्रकारको अवरोध छैन।
VAWT हावा टर्वाइनका कस्ता बेफाइदाहरू छन्?
यस प्रकारका हावा टर्बाइनहरूको नामुल्यले निम्न समावेश गर्दछ:
स्थापनाको प्रारम्भिक लागत निकै उच्च छ।
यदि तपाईं त्यस्तो क्षेत्रमा हुनुहोला जहाँ लगातार धेरै हावा हुदैन लगातार, सम्भावनाहरू त्यस्तै हुन्छन् ऊर्जा दक्षता हटाउन सकिदैन.
आवाजको कारण छिमेकीहरूसँग समस्या हुन सक्छ।
टर्बाइनहरू प्राय: लगभग %०% को क्षमतामा मात्र संचालन गर्दछ।
हावा टर्बाइन र ईतिहासको प्रयोग
हावाबाट विद्युतीय उर्जाको प्रयोग विवादास्पद घरहरूमा हावा रोटरहरूको साथ प्रयोग भैसकेको छ २० औं शताब्दीको बीचमा ग्रामीण क्षेत्रमा.
तर that० को दशकमा यस प्रविधिमा साँच्चिकै शर्त लगाएको एउटा डेनमार्क थियो। यस तथ्यले यो देश हुन अनुमति दियो एक अग्रणी निर्माताहरु यस प्रकारको हावा टर्बाइन जसरी भेस्तास र सीमेन्स विन्ड पावरको सम्बन्धमा छ।
पहिले नै २०१ Already मा, हावा ऊर्जा % 33% को बराबर उत्पादन २०१ electricity मा%%% सहित कुल बिजुली खपत। अब डेनमार्कको लक्ष्य २०२० सम्म 39०% र २०2014 50 2020% सम्म पुग्ने लक्ष्य छ।
यस देशले पैदा गरेको परिवर्तन थियो उच्च CO2 उत्सर्जनका कारण s० को दशकको अन्ततिर, त्यसैले नवीकरणीय उर्जा यो देशको लागि मुख्य विकल्प भयो। यसले अन्य देशहरूमा ऊर्जा निर्भरता कम र वैश्विक प्रदूषणमा कमी ल्यायो।
ऐतिहासिक डेनमार्कमा स्थापना भएको थियो पहिलो हावा टर्बाइन जुन २ मेगावाट पुग्यो। पावर प्लान्टमा ट्यूबलर टावर र तीन ब्लेडहरू थिए। यो टिभिन्ड स्कूलका शिक्षक र विद्यार्थीहरूले निर्माण गरेका थिए। र यस कथाको बारेमा रमाईलो कुरा यो हो कि ती "शौकिया" लाई उद्घाटन हुनुभन्दा अघि उनीहरूको हाँसोमा उडाइएको थियो। आजसम्म त्यो टर्बाइन अझै पनी काम गर्दछ र सबैभन्दा आधुनिक हावा टर्वाइनसँग मिल्दोजुल्दो डिजाईन छ।
हावा टर्बाइनको भविष्य
आजको दिनसम्म, टेक्नोलोजिकल आविष्कारहरू देखा पर्न जारी छ अनुप्रयोगहरू सुधार गर्नुहोस् हावा ऊर्जा को। २०१ 2015 मा, सबैभन्दा ठूलो स्थापित टरबाइन तट नजिक प्रयोगको लागि भेस्तास V164 थियो।
२०१ 2014 मा, अधिक २240.000०,००० हावा टर्बाइनहरू तिनीहरू विश्वमा कार्यरत थिए, विश्वको%% बिजुली उत्पादन गर्छन्। २०१4मा, कुल क्षमता 2014 336 G गीगावाट पारित गरी चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, स्पेन र इटालीको स्थापनामा नेताहरूको रूपमा।
र ती यी देशहरू मात्र होइन उनीहरूको ठाडो वा तेर्सो अक्षको हावा टर्बाइनहरूको जनसंख्या वृद्धि गर्दैछ, तर अरू धेरै तिनीहरू अधिक दिगो भएको बाटो खोज्छन् फ्रान्सको एफिल टावरको सन्दर्भमा हाल यो नयाँ टर्बाइन स्थापना गरिएको वायु टर्बाइनको लागि धन्यवाद छ र यसमा एलईडी बत्ती, सौर प्यानल र वर्षा जल संकलन प्रणाली जोडियो भने स्वच्छ र सस्तो उर्जा प्रबर्द्धन गर्न सकिन्छ।
न त हामी यस रूप मा नयाँ प्रयासहरू बिर्सन सक्छौं 157 नयाँ हावा फार्महरूको लागि3हावा टर्बाइनहरू दक्षिण अफ्रिकामा जुन यस प्रकारको टेक्नोलोजीको सिमेन्स जस्ता सबै भन्दा ठूला निर्माताहरूको हातबाट आउँदछ। उनीहरूले3140 को बीचमा १ 2016० मेगावाटको क्षमता थप गर्ने छन र आशा छ कि उनीहरू २०१ XNUMX को सुरूमा यस अफ्रिकी देशको नजिकको जनसंख्यालाई बिजुली प्रदान गर्न स्थापना हुनेछन्।
अस्थायी हावा टर्बाइनहरूको प्रविधि
जस्तो कि हामी यसमा देख्न सक्छौं हावा ऊर्जा को इतिहास, अपतटीय हावा २०० in मा विस्तार गर्न सुरु भयो जब Hywind फ्लोटिंग वायु टर्वाइन नर्वेमा 62२ करोड डलरको लागतमा स्थापना भएको थियो।
जापान, फुकुशिमा आणविक विपत्ति पछि, भएको छ of० को स्थापना योजना २०२० सम्ममा नजिकैको किनारमा समुद्री हावा टर्वाइनहरू।
भोर्टेक्स प्रोपेलरलेस वायु टर्बाइनहरू
Deutecno भनिने एक स्पेनिश कम्पनी छ भागहरु बिना एक हावा टर्वाइन सिर्जना जुन दक्षिण समिट २०१ 2014 मा ऊर्जा वर्गमा पहिलो पुरस्कार जित्यो।
यी प्रोपेलरलेस विन्ड टर्बाइनहरू हुन् तिनीहरू ती विशाल हावा टर्बाइनहरू हटाउने काममा थिए क्षितिज परिमार्जन गर्नुहोस् जहाँ तिनीहरू स्थापना भए। यसको कार्यक्षमता समान हुनेछ तर पर्याप्त महत्वपूर्ण लागत बचतको साथ, यसको मर्मत र स्थापना सस्तो छ भन्ने तथ्य बाहेक।
त्यहाँ पनि हुनु पर्छ वातावरणीय प्रभाव मा कमी यस बाहेक यसले पारम्परिक हावा टर्वाइनहरूले उत्पन्न गर्ने आवाज हटाउँदछ।
तिनीहरूको टेक्नोलोजी यस्तो तरिकाले काम गर्दछ कम्पनले गर्दा विकृति प्रयोग गर्दछ जुन हावाको कारणले गर्दा हो जब अर्ध कठोर ठाडो सिलिन्डरमा अनुनादमा प्रवेश गर्दा र भुइँमा लंगर।
भोर्टेक्सको मुख्य अंश, जुन सिलिन्डर हो, भएको छ पाईजोइलेक्ट्रिक सामग्रीबाट बनेको र फाइबरग्लास वा कार्बन, र विद्युतीय उर्जा यी सामग्रीहरूको विरूपणबाट उत्पन्न हुन्छ।
२०१ 2016 साल हुनेछ जसमा पहिलो ब्लेडलेस पवनचक्की युनिट तयार छ।
एक पर्याप्त अभिनव परियोजना हावाको रूख हो जुन NewWind द्वारा विकसित गरिएको हो र त्यो हो artificial२ कृत्रिम पातहरू मिलेर बनेको छ। ती प्रत्येकमा एक ठाडो टर्बाइन छ र यसको आकार सानो आकारको छ जसले २ सेमी प्रति सेकेन्डको हल्का हावाको साथ उर्जा उत्पादन गर्न सक्छ।
यसले तपाईंलाई अनुमति दिन्छ २280० दिनको लागि उर्जा उत्पादन गर्नुहोस् वर्षमा र यसको कुल उत्पादन 3.1.१ किलोवाट छ 72२ टर्वाइनहरू चल्दैछन्। ११ मीटर उचाई र diameter मिटर व्यासमा, हावाको रूख वास्तविक रूखको आकारको नजिक छ त्यसैले यो सहरी क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा फिट हुन सक्दछ।
Un धेरै खास परियोजना र यसले हामीलाई ती प्राविधिक प्रगतिहरूको अगाडि राख्दछ जुन मार्ग अझ बढी सक्षम हुन र सार्वजनिक बिजुली ग्रिडमा पर्याप्त ऊर्जा प्रदान गर्न सक्षम हुन वा भवनको लागि अतिरिक्तको रूपमा खोज्नको लागि खोज्दछ।
हावा टर्बाइनको अंशहरू
छवि - विकिमेडिया / एनरिक डान्स
समग्र रूपमा हावा टर्बाइनहरू तिनीहरूले २०० मीटर उचाई र २० टन मापन गर्न सक्छन् तौल को। यसको संरचना र घटक जटिल छन् र अधिकतम १०० को गतिबाट बिजुली उत्पादन अनुकूलन गर्न निर्मित छन्।
कम्पोनेन्टहरू बीच र हावा टर्वाइन को भागहरुr हामीसंग छ:
हावा टर्बाइनका लागि आधारभूत हुनुपर्दछ राम्रोसँग एक बलियो आधारमा जोडिएको छ। यसका लागि, क्षैतिज अक्ष पवन टर्बाइनहरू भूमिगत प्रबलित क concrete्क्रीट फाउन्डेशनको साथ निर्माण गरिन्छ जुन भूभागमा यो अवस्थित छ जहाँ अनुकूलन हुन्छ र वायुको भारहरूको सामना गर्न मद्दत गर्दछ।
धरहरा हावा टर्बाइनको अंश हो सबै वजनलाई समर्थन गर्दछ र ब्लेडहरूलाई भूमिबाट जोगाउने एक हो। यो शीर्षमा प्रबलित क concrete्क्रीट र शीर्षमा इस्पातबाट बनेको छ। गन्डोलामा पहुँच अनुमति दिन यो सामान्यतया खाली हो। टावर पर्याप्त हावा टर्वाइन बढाउनको लागि जिम्मेवार छ कि यसले अधिकतम सम्भावित हावाको गति लिन सक्दछ। इस्पात वा फाइबरग्लास घुम्ने नेसेल टावरको अन्त्यमा जोडिएको छ।
ब्लेड र रोटर
आजका टर्बाइनहरू बनेका छन् तीन ब्लेडहरु यो बारी मा अधिक सहजता प्रदान गर्दछ। ब्लेडहरू कांच वा कार्बन फाइबरहरूको सुदृढीकरणको साथ पोलिस्टर कम्पोजिट सामग्रीले बनेको हुन्छ। यी यौगिकहरूले ब्लेडलाई अधिक प्रतिरोध दिन्छ। ब्लेडहरू १०० मिटर लामो हुन सक्छ र रोटर हबमा जोडिएको हुन्छ। यस हबलाई धन्यवाद, ब्लेडहरूले हावाको फाइदा लिन ब्लेडको घटनाको कोण परिवर्तन गर्न सक्दछ।
वर्तमानमा रोटर्सको सम्बन्धमा तेर्सो हो र जोर्नी हुन सक्छ। सामान्यतया, यो टावरको विन्डवर्ड साइडमा अवस्थित हुन्छ। यो ब्लेडमा चक्रीय भारहरु लाई कम गर्नका लागि गरिन्छ यदि यो यसको लीडरडमा अवस्थित छ भने देखा पर्न सक्छ, यदि टावरको पछाडि ब्लेड राखिएको छ भने घटनाको गति धेरै परिवर्तन हुनेछ।
यो एक घन छ जुन तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ यो हावा टर्वाइनको इन्जिन कोठा हो। नेसेल हावाको अनुहारको टर्वाइन स्थितिको लागि टावरको वरिपरि घुम्छ। नेसेलेले गियरबक्स, मुख्य शाफ्ट, नियन्त्रण प्रणाली, जेनेरेटर, ब्रेक, र मोडि mechan संयन्त्र समावेश गर्दछ।
गियरबक्सको प्रकार्य हो मोडको गति समायोजित गर्नुहोस् मुख्य शाफ्टबाट जेनरेटर द्वारा आवश्यक एकमा।
आजको हावा टर्बाइनहरुमा त्यहाँ तीन प्रकारका टर्वाइनहरू छन् यो केवल जेनेरेटरको व्यवहारबाट भिन्न हुन्छ जब यो अत्यधिक हावाको गतिमा हुन्छ र अत्यधिक भारहरूदेखि बच्न प्रयास गरिन्छ।
लगभग सबै टर्बाइनले यी systems प्रणालीहरू मध्ये एक प्रयोग गर्दछ:
गिलहरी केज प्रेरण जेनरेटर
बिफासिक प्रेरण जनरेटर
ब्रेकिंग प्रणाली यो एक सुरक्षा प्रणाली हो यसमा डिस्कहरू छन् जुन आपतकालीन वा मर्मत सम्बन्धी परिस्थितिहरूमा मिल रोक्न र संरचनाहरूमा हुने क्षति रोक्न मद्दत गर्दछ।
पवनचक्की पूर्ण छ नियन्त्रण र नियन्त्रण प्रणाली द्वारा स्वचालित। यो प्रणाली कम्प्युटरहरू मिलेर बनेको छ जसले हावा वेन र एनेमिटरको माथिल्लो भागमा राखिएको जानकारी प्रबन्ध गर्दछ। यस तरिकाले मौसमको अवस्थालाई थाँहा गर्दै मिल र ब्लेडहरू उडिरहेको बतासको साथ बिजुली उत्पादन अनुकूलन गर्न अझ राम्रो हुन्छ। तिनीहरूले टर्बाइनको स्थितिको बारेमा प्राप्त गर्ने सबै जानकारी टाढैबाट केन्द्रीय सर्भरमा पठाउन सकिन्छ र सबै कुरा नियन्त्रणमा छ। घटनामा कि हावाको गति वा मौसमको हावाले हावा टर्बाइनको संरचनालाई बिगार्न सक्छ, नियन्त्रण प्रणालीको साथ तपाईले तुरुन्तै अवस्था थाहा पाउन सक्दछ र ब्रेकिंग प्रणाली सक्रिय गर्न सक्दछ, जसले गर्दा क्षतिबाट बच्न।
तपाईंले गर्न सक्नुहुने पवन टर्बाइनका यी सबै भागहरूका लागि धन्यवाद हावाबाट बिजुली उर्जा उत्पन्न गर्नुहोस् वातावरणको लागि नवीकरणीय र गैर-प्रदूषक तरीकामा।
लेखको पूर्ण मार्ग: हरियो नवीकरणीय » नवीकरणीय ऊर्जा » वायु शक्ति » ठाडो पवन टरबाइन
pablo acevedo g। भन्यो
हामीसँग एक विद्युत उत्पादन परियोजना छ। मलाई सुरू गर्न सम्पर्कहरू चाहिएको छ। फोन 57830415 7383284१_XNUMX you धेरै धेरै धन्यबाद
Pablo acevedo g लाई जवाफ दिनुहोस्।
जाभियर गार्सिया भन्यो
म घरको लागि वायु टर्बाइन फेला पार्न चाहन्छु जुन व्यक्तिगत परियोजनाको लागि प्रति दिन २k किलोवाट उत्पादन गर्न सक्दछ र त्यसले लागत संकेत गर्न सक्छ, धन्यवाद
Javier Garcia लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते जेभियर .. तपाईको प्रश्नबाट मैले देखें कि तपाईलाई १ किलोवाट घण्टा चाहिन्छ ... म तपाईलाई बजारमा उत्तम मूल्य र गुण प्रदान गर्दछु।
यसको लागि मलाई तपाईंको पृष्ठभूमि जस्तै शहर, देश, आदि आवश्यक छ।
जर्ज पाउकर भन्यो
हेलो म यस प्रोजेक्टको सुरुमा नै हुँ, धेरै प्रोमिसिंग परिणामहरू छन् पहिले नै परीक्षण गरिएको छ र मेरो मेलमा कम खर्च आउँछ। a_eletropaucar@hotmail.com पेरु
जर्ज पाउकरलाई जवाफ दिनुहोस्
फ्रान्सिस्को Villen। भन्यो
यी जेनेरेटरहरूको धेरै छोटो मार्ग छ, किनकि यो केवल कुनाको चारैतिर छ, चुम्बकीय चुम्बकीय धारा (म्याग्नेट) बाट बिजुली उत्पादन र सबै घरहरू आफ्नै जेनेरेटर पाउन सक्षम हुनेछ, or वा k किलोवाटको समान ठाउँमा। धुने मेसिनको लागि।
फ्रान्सिस्को Villen लाई जवाफ दिनुहोस्।
मार्लन एस्कोबार भन्यो
अभिवादन, म अधिक जानकारी चाहान्छु आवासीय भवनमा तपाईंको समाधान कार्यान्वयन गर्न, हामी खपत र / वा हटाउन चाहन्छौं; हामीसँग पोखरी र सबै सामान्य क्षेत्रहरूको प्रकाशको लागि इलेक्ट्रिक हीटर छ, कृपया ठाडो जेनेरेटरहरूको बारेमा पूर्ण टेक्निकल जानकारी पठाउनुहोस्।
मार्लन एस्कोबारलाई जवाफ दिनुहोस्